CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- XPE Foaming Coil Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara-- XPE Foaming Coil Extrusion Line
Fotoana: 2018-04-15 Hits:
Ny fiasa amin'ny tsipika: mifototra amin'ny traikefa vita amin'ny 20 taona natao ho an'ny Shanghai Jwell Extrusion Machinary Co., ltd, miantoka ny fahatoniana ny tsipika voalohany ary ny famokarana avo kokoa; amin'ny fanatsarana hatrany ny firafitry ny volavolan-tsolika XPE, mitaona ny tsipika famokarana avo kokoa ny vokatra avo lenta, fanjifana angovo ambany, sakany lehibe, lavaka mihosin-kely ary tombony maro hafa, koa mba hanatanterahana ny fitakian'ny mpanjifa samy hafa dia manana faritra roa ao amin'ny lafaoro izahay ary fizarana fatana telo ho an'ny safidin'ny mpanjifa:
Fahombiazana avo lenta: ny vokatra dia nitombo mihoatra ny 30%, ary ny sakany amin'ny vokatra dia mety hahatratra 2200mm.
Mitsitsy angovo: mitsitsia entona 100 metatra toradroa / 24h.
Fampiharana: ny vokatra dia mifantoka amin'ny fiara, fanatanjahan-tena ary ny haingon-trano haingon-trano, dia fitaovana mety tsara ho an'ny tongotra sy ny toetran'ny rivotra izy io mba hihazonana hafanana
1. Fampiharana ny indostrian'ny fiara:
Ao anaty lovia mpiambina ny varavarana fiara, manodidin'ny varavarana tsy misy rano, fantsom-baravarankely varavarana fiara, fantson-drivotra ho an'ny fiara; tabilao filamatra, fantsom-panafana hafanana, tsihy fanamoriana, fantsom-batana; ampahany amin'ny fikikisana.
2. Fampiharana ny indostrian'ny mari-pana:
Fanamafisana ny fantson-drivotra, fidirana amin'ny hatairana, fanamafisam-peo
3. Fampiharana indostrian'ny fananganana:
Fitaovana tsy tantera-drano, insulation amin'ny rindrina, insulateur amin'ny tafo sy fitaovana fanamafisam-peo, ondana fanamafisam-peo amin'ny gorodona sns.
4. Fampiharana amin'ny sehatry ny fanatanjahantena:
XPE sy IXPE dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanatanjahantena eo am-piandohana, ary mahazatra sy matotra. Ohatra: tsihy fanatanjahan-tena, tantanana, ondana, tsihy fitobiana, farafara yoga, tsihy, fihanika fiakarana, tsihy bozaka fanatanjahan-tena sy endrika maro samihafa.
5. Fampiharana indostrian'ny fitaovana kiraro sy entana:
XPE sy IXPE dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny kiraro sy kitapo hanoloana ny EPE ho fitaovana anatiny lehibe.
6. Fampiharana fitaovana mitsingevana, kilalao ary indostrian'ny fialamboly:
XPE, IXPE ho toy ny fitaovana mitsingevana, azo zahana ho lifejacket, peratra filomanosana, board mitsingevana, surfboard, fihazakazahana, sns sns. Ny XPE sy IXPE dia mora raisina, ary afaka mamokatra fitaovana tsara indrindra ho an'ny kilalao sy vokatra fialamboly tsy misy fiovana. sy endrika tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza.
Ampiana: No.111 Chun YI Road ， Faritra Industrial Huang Du, Distrikan'i Jia Ding., Shanghai
HIVERINACHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara - Plastika Geogrid Extrusion
NEXTFampandrenesana ny Fetin'ny Fetin'ny Lohataona